चीनमा फैलिरहेको ‘कोरोना’ भाइरस नेपाल भित्रिने जोखिम उच्च – Health Post Nepal
चीनमा फैलिरहेको ‘कोरोना’ भाइरस नेपाल भित्रिने जोखिम उच्च
२०७६ माघ ७ गते १६:३७
मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएनद्वारा प्रहरी अस्पताललाई पिपिई र मास्क सहयोग
थप ८२१ जनामा कोरोना, संक्रिय संक्रमित १०९५५
चीनमा रहस्यमय रूपमा देखापरेको भाइरस फैलिने क्रम जारी छ । भाइरसको संक्रमणका कारण अहिलेसम्म चारजनाको मृत्यु भइसकेको पुष्टि चिनियाँ अधिकारीहरूले गरेका छन् । ‘कोरोना’ नाम दिइएको सो भाइरसबाट अहिलेसम्म दुई सयभन्दा बढी संक्रमित भइसकेको चीन सरकारको भनाइ छ । यद्यपि, ब्रिटेनका विशेषज्ञले चिनियाँ अधिकारीले सार्वजनिक गरेभन्दा संक्रमितको संख्या बढी रहेको दाबी गरेका छन् । संक्रमितमा देखिएका लक्षणका आधारमा कोरोना भाइरसकै एक प्रकारका रूपमा यसलाई हेरिएको छ ।
चीनका मुख्यतः ३ सहरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएको छ । युहान, बेइजिङ र सेन्चेनमा संक्रमित भेटिएका हुन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले भाइरस र यसको संक्रमणबारे अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।
युहानको स्थानीय प्रशासनले गत साताको अन्तसम्म १ सय ३६ जनामा यसको संक्रमण पुष्टि भएको जनाएका थिए । तर, आइतबार साँझको तथ्यांकअनुसार युहानमा संक्रमितको संख्या १ सय ७० पुगेको बताइएको छ । संक्रमितको उपचार भइरहेको र ९ जनाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको चिनियाँ अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
सेनचेनका अधिकारीले दिएको सूचनाअनुसार ६६ वर्षीय वृद्धमासमेत भाइरसको संक्रमण फेलापरेको छ । उनी केही समयपहिले आफन्त भेट्न युहान सहर गएका थिए । त्यहीँबाट संक्रमित भएर आएको हुन सक्ने अनुमान चिकित्सकको छ ।
सुरुमा डिसेम्बर महिनामा चीनमा देखापरेको यो नयाँ भाइरस अहिले अन्य देशमा पनि फैलिरहेको छ । चीनबाहेक थाइल्यान्डमा एक र जापानमा एक व्यक्तिमा नयाँ कोरोनाको संक्रमण भेटिएको छ । अन्य देशसमेत प्रभावित हुन थालेपछि सीमा जोडिएको नेपालमा पनि यसको जोखिम बढेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको चाप अत्यधिक छ । पर्यटनसँगै व्यापार, अध्ययन, सरकारी कामलगायतका लागि नेपाल र चीनका नागरिक एक–अर्को देशमा आवत–जावत गर्ने क्रम बाक्लो भएकाले मानिसबाट मासिनमा सर्ने यो भाइसर भित्रिने जोखिम उच्च रहेको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ ।
चीनमा अहिले कोनोनाको परीक्षण गराउनेको चाप छ । भाइरस परीक्षणका लागि बिरामीबाट लिइएको रगतको नमुनाले प्रयोगशालामा अधिक चाप परेको छ । चिनियाँ अधिकारी र विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको जनाएका छन् ।
प्रारम्भिक अध्ययनको निचोड– नयाँ भाइरस कोरोनाकै सातौँ प्रकार हो
कोरोना भाइरस थुप्रै प्रकारका हुने भए पनि मानिसमा भने यसअघि यसका ६ प्रकारको संक्रमण पाइएको छ । नयाँ देखिएको भाइरसलाई मानवमा संक्रमणका हिसाबले कोरोनाको सातौँ प्रकारका रूपमा हेरिएको छ ।
जेनेटिक कोडको विश्लेषणबाट यो ‘सार्स’ भाइरसको तुलनामा मान्छेमा चाँडो संक्रमण गर्ने खालको रहेको पाइएको छ । ‘सार्स’ नामको कोरोना भाइरस निकै खÞतरनाक मानिन्छ । सार्सका कारण चीनमा २००२ मा ८ हजार ९८ जनामा संक्रमण देखिएको थियो भने ७ सय ७४ जनाको यही भाइरसका कारण ज्यान गएको थियो ।
चीनको नेसनल हेल्थ कमिसनले केही समयअघि भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने दाबी गरेका थिए । तर, हालसम्म संक्रमण भने बढिरहेको छ । यद्यपि, महामारीको रूप भने लिइसकेको अवस्था छैन ।
लक्षण सामान्य तर उपचार जटिल
कोरोना भाइरस संक्रमितमा रुघा लाग्ने, ज्वरो आउनेजस्ता लक्षण देखापर्छन् । तर, आमरुघा लागेजस्तो नहुँदा उपचार थप जटिल भएको विशेषज्ञको भनाइ छ । यदि भाइरसले बढी ग्रस्त पारेमा संक्रमितको ज्यानै जान सक्ने खतरा हुन्छ ।
युनिभर्सिटी अफ एडिनबर्गका प्रोफेसर मार्क बुलहाउसले भनेका छन्, ‘जब हामीले नयाँ कोरोना भाइरस देख्यौँ, हामीले बुझ्ने कोसिस गर्यौँ । तर, यसको असर यति खतरनाक छ कि यो आमरुघाजस्तो देखिँदैन । यो निकै चिन्ताको विषय हो ।’ यो भाइरस जीवका एक प्रजातिबाट अर्को प्रजातिमा जान्छ र यसले मान्छेमा संक्रमण गर्न पुग्छ । यसका दौरान यसबारे केही थाहा हुँदैन ।
नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिमबारे सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बास्तोला भन्छन्–
कोरना भाइरस मानिसबाट मानिसमा संक्रमण हुने भएकाले चीनबाट आउने संक्रमितबाट नेपालमा पनि फैलिने सम्भावना छ । चीनबाहेक पनि अन्य देशमा भाइरस फैलिसकेको अवस्थामा नेपालले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले विमानस्थलमा रहेको हेल्थडेक्सलाई चनाखो र चुस्त–दुरुस्त राख्नुपर्छ । भाइरसका लक्षण देखिएका व्यक्तिको स्वास्थ्यकर्मीद्वारा चेकजाँच गराई उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
Tags: कोरोना, डा. अनुप बास्तोला